Inona no hatao raha voan'ny phlebitis ny alikako? | Tontolo alika
Phlebitis dia a aretina izay nivonto lalan-drà. Matetika izy io dia vokatry ny fepetra iray hafa antsoina thrombophlebitis ary nilaza fa ny aretina dia miavaka amin'ny alàlan'ny fananganana lalan-drà ao amin'ny lalan-dra ary manakana ny fikorianan'ny rà, mamorona fivontosana amin'ny lalan-drà manakaiky ny velarana na ny vokany eo amin'ilay faritra mitovy.
Ny mahazatra indrindra dia a thrombophlebitis ambonin`ny ary azo jerena haingana. Ity aretina ity dia tsy maintsy tsaboina haingana, ka rehefa mihevitra ianao fa mahita lalan-drà mirehitra dia ilaina ny manatona mpitsabo biby, indrindra raha any amin'ny faritra marefo. Misy ihany koa karazana phlebitis hafa ary mampidi-doza kokoa izy ireo satria afaka manakana ny fikorianan'ny rà mankany amin'ny taova lehibe, na izany aza dia azo tsaboina ity aretina ity.
1 Ahoana no hataonao raha voan'ny phlebitis ny alikanao?
2 Inona no hataon'ny mpitsabo biby amin'ny fitsaboana io aretina io?
Ahoana no hataonao raha voan'ny phlebitis ny alikanao?
Zava-dehibe ny fahalalana ny soritr'aretina, ny ara-dalàna sy mora azo sary an-tsaina dia ny fivontosana amin'ny faritra iray.
Mety misy eo amin'ny tongotra izany, izay ahitanao a fivontosan'ny rehetra na ny ampahany amin'ny tongotra, azo atao koa ny mahatsapa fanaintainana na hafanana ao amin'ny faritra ny biby fiompinao, ara-dalàna dia ho hitanao fa manaikitra na milelaka ilay faritra amin'ny fomba manandrana manasitrana na manala fanaintainana, ara-dalàna ihany koa ny vatan'ny alika raha mamaly amin'ny fivontosana , noho izany mazàna ianao dia hahazo tazo na marary mitsika manerana ilay faritra voadona.
Fahita fa mandritra ny fiainam-alikao dia miaina a aretina phlebitis ary tsy misy risika miharihary, na izany aza ny alika tanora kokoa na antitra azo inoana kokoa fa hijaly ny iray amin'izy ireo, satria rehefa tena tanora izy ireo dia tsy mivoatra araka ny tokony ho izy ny rafitry ny hery fiarovany na mifanohitra amin'izay, rehefa mandroso taona izy ireo dia mandroso tanteraka ity rafitra ity, na izany aza tsy mandeha amin'ny fomba marina.
Misy koa ny sasany pathologies izay miantoka ny risika amin'ny fampandrosoana phlebitis, toy ny hatavezina, mijaly amin'ny voa na aretim-po, tsy dia tsara kalitaon'ny lalan-drà na tsy dia mandeha aza. Tranga iray hafa izay tena mora tohina amin'ity aretina ity ny alika vavy bevohoka, raha sendra misy alika mizaka ny tsy fetezana ao amin'ny hery fiarovan'ny vatana dia mety ho voan'ny aretina phlebitis koa io.
Alohan'ny soritr'aretina hitanao amin'ny biby fiompinao ilaina ny mandeha any amin'ny vet Mba hamahana ny olana dia hanao diagnostika mifanaraka amin'ny tranga izy ary hitady vahaolana hitsaboana azy haingana araka izay tratra.
Inona no hataon'ny mpitsabo biby amin'ny fitsaboana io aretina io?
Ho an'ity diagnostika ity dia fitsapana maro no tanterahina, anisan'izany ny urinalysis, sary x-ray, fitsapana izay mamakafaka ny fikorianan'ny rà, na kolontsaina ra sasany.
Ny mahazatra indrindra dia izay ny manam-pahaizana dia manomboka amin'ny fanomezana fanafody fanoherana ny inflammatoireMba hampihenana ny fivontosana ao amin'ilay faritra voadona ary raha sanatria miahiahy ny dokotera fa aretina io dia mety manome fanafody antibiotika izy, miankina amin'ny faritra misy ny phlebitis io fanafody io.
Zava-dehibe ny fanarahanao ny torolàlana omen'ny mpitsabo biby anao momba ny fitantanana fanafodyMety hitranga ihany koa ny fanafody sasany omena mba hahatonga ny biby fiompinao hahatsapa ho tsara kokoa, hanala ny fanaintainana ao amin'ilay faritra. Saingy amin'ny tranga henjana indrindra dia mety maharitra hatramin'ny telo herinandro vao sitrana tanteraka. Raha izany dia a thrombophlebitis lalina, ny mpitsabo dia tsy maintsy manao diagnostika amin'ny alàlan'ny fitsapana hafa ary mety hanoratra anticoagulant.
Para sorohy ny phlebitis amin'ny biby fiompinaoIlaina sy ilaina ny mitandrina ny fahasalaman'izy ireo, noho izany dia tsy maintsy sorohinao fa matavy loatra ny biby fiompinao satria tsy vitan'ny hoe miteraka phlebitis fotsiny izany fa koa olana ara-po ary tadidio fa ny alika tanora sy antitra dia tsy maintsy karakaraina antitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Inona no hatao raha voan'ny phlebitis ny alikako?
Rollerjoring, mitaingina alika amin'ny alikanao